Iko Kudya Kwemwana Wako Kunokwezva Zvinoenderana Nezvinhu Zvevatambi Zvevana | GFUN
Iko Kudya kwemwana Wako Kunokwezva Zvinoenderana Nezvivakwa Zvevatambi Zvevana
Hauzive maitiro ekushandisa vana vemitambo yekutamba? Iri idambudziko rakatarisana nevazhinji vatengi vachangopinda mubhizinesi. Kune akawanda emabhizimusi emhinduro dzevatengi zvisina kunaka sezvavanofunga. Muchokwadi, iyi haisi nyaya yemidziyo.
Kana tikasarudza nzira yakakodzera yekutarisira, tinogona kuwedzera mari yedu. Kusevenzesa kwemidziyo yekutamba yevana rave riri dambudziko rakakura. Sezvakangoita mubhizinesi, kana iwe usina ruzivo, haugone kuona kuti nei iwo maturusi akafanana anogona kuita mari mune imwe nharaunda.
Uku ndiko kusarudza kwebhizinesi nzira. Kana iwe uchida kubata yako yekuvaraidza michina, iwe unofanirwa kuziva yako nzvimbo uye vanhu vakakukomberedza. Paunenge uchisarudza kutenga zvekutamba zvevana, sarudza michina yakakodzera munzvimbo yacho. Inoshanda kune vanhu vazhinji mumunda.
Ramba uchifunga kuti zvigadzirwa zvekutamba hazvisi zvevana chete. Kune dzevatambi zvigadzirwa zvevatambi zvekushandisa, zvichienderana nenzvimbo dzavanogara uye zvekushandisa zvakatengwa pakuronga. Zvinoenderana nebasa, nguva uye nhamba yevanhu. Hazvibviri kutaura nenzira yekupofu kuti inoita mari.
Izvi hazvisi zverefu-refu.
Kana iwe usingonyatso kuziva mashandiro kana kushanda zvakanaka, isu tichagadzira yakadzama manejimendi nzira kune yako saiti, ruzhinji nemidziyo yekugadzirisa zvinonetseka zvako! Midziyo yevatambi yevana inogona kusimudzira kufarira kwevana kwenguva yakareba. Vana vanogara vachishuvira pamusoro pezvese, zvinhu zvitsva zvinokwezva kwavari, uye maitiro ekuchengeta izvo zvinokwezva zvinoenderana nekutasva.
Semuenzaniso, vana vane hure, Mamiriro ekunze emutambo akachengeteka. Kuchengetedza kwagara kuri nyaya kubva pakutanga. Kana paine chekuchengetedza mumidziyo yekutamba yevana, haigone kushanda. Naizvozvo, kana uchengetera mari mumabhiza, iwe unofanirwa kusarudza mugadziri anokwanisa kutenga yakatasva mabhiza akachengeteka.